IIMIDLALO EZILI-10 EZIPHAMBILI ZEQHINGA LONKE IXESHA - UKUZONWABISA
Iimidlalo ezili-10 eziPhambili zeQhinga lonke ixesha
Ikhuthazwe yimidlalo yetafile enje ngechess kunye ne-backgammon, imidlalo yeqhinga lesicwangciso sevidiyo ibe yinto ephambili kushishino lokudlala ukusukela oko laqala. Ungawubona umdlalo weqhinga ngokusebenzisa izinto zalo eziqhelekileyo ezinje ngokuba neeyunithi zokuyalela, ubutyebi kunye nemiceli mngeni yezoqoqosho, ulwakhiwo lokuhlala, umthi wetekhnoloji, kunye nemephu yehlabathi.
Imidlalo yesicwangciso ihlala yahlulwahlulwa yangamacandelwana aliqela. Zingaba lixesha lokwenyani okanye zijike kwaye zijolise kwisicwangciso okanye kubuchule. Inqaku eliqhelekileyo yimfuno yezakhono zokucwangcisa eziphezulu ukuze uphumelele. Ngelixa imidlalo yesicwangciso esisekwe ekujikeni yayiqhelekile kwiminyaka edlulileyo kuba yayingafuneki kangako, imidlalo yexesha lokwenyani sele ithandwa kakhulu kule minyaka idlulileyo.
Ezi ntsuku, nangona kunjalo, indibaniselwano yazo zombini ezi subgenres inokufumaneka kwimidlalo yeqhinga edumileyo, njengoko kubonisiwe yi Imfazwe iyonke ilungelo lokushishina.Kuba uninzi lweqhinga lemidlalo likhutshwa ikakhulu kwi-PC, sagqiba kwelokuba sibandakanye imidlalo ekhutshwe ikakhulu kwiWindows kunye neMacOS kolu luhlu. Siye saqinisekisa ukuba siqaphela ukuba umdlalo ubukhona kwamanye amaqonga.Jonga uluhlu lwethu lweyona midlalo ilishumi ilungileyo yexesha lonke.
1. I-StarCraft II: Amaphiko eNkululeko (2010)
Le yayiyindlela elindelweyo ekudala ilindelwe kwi-classic classic ka-1998 StarCraft kunye nokwanda kwayo, BroodWar. I-StarCraft II: Amaphiko oKhuseleko yenzeka kwiminyaka embalwa emva kwebali le BroodWar kwaye ibonisa ukubuya kwabalinganiswa abaphambili njengoJim Raynor noSara Kerrigan.
Ngokungafaniyo nomdlalo wokuqala, Inkwenkwezi II yazisa umkhankaso ongekho kumgca weqela leTerran, kunye neRaynor's Rebels ethatha imisebenzi yemikhosi ukunyusa imali kunye nokuthenga iiyunithi ezongezelelweyo kunye nokuphuculwa. Ukulandelelana kukwazisa ngemizobo ye-3D ngokuchasene neyokuqala eyayinqunyelwe kwi-2D.
Inkwenkwezi II yamkelwa ngokugxekayo kwaye ithathwa ngokubanzi njengeyona midlalo yevidiyo intle kwintengiso. Ukwandiswa kwayo, Intliziyo yeQela kwaye Ilifa leNgenanto zakhutshwa ngo-2013 nango-2015 ngokwahlukeneyo.
Ubudala bemibuso II: uHlelo oluCacisiweyo (2019)
Olunye uhlobo lweklasikhi, Ubudala bemibuso II: Iminyaka yooKumkani , Ndifumene ingxelo ehlaziyiweyo kunye nokukhululwa kwe Ubudala bemibuso II: uHlelo oluqinisekileyo Ngo-2019 ukubhiyozela iminyaka engama-20 yokuqala.Ngelixa Ubudala beeKumkani yayiyimidlalo ekufuneka idlalwe kubo bonke abalandeli bemidlalo yeqhinga, le nguqulo iphindiweyo iyaphucuka kuyo yonke imiba ngelixa igcina zonke izinto ezenza eyantlandlolo ithandwa kakhulu ngabadlala umdlalo.
I tattoo zika-harley davidson zeengalo
Inkqubo ye- Ushicilelo olucacileyo ixhasa imifanekiso ye-4K, ukubonwa okungcono kwemikhosi kunye nolwakhiwo, kunye nemowudi yombukeli. Abaphuhlisi bongeze amaqela amatsha kunye nemikhankaso eya kuthi ngokuqinisekileyo ixhase abalandeli beklasikhi kunye nabadlali abatsha ngokufanayo. Lonke ulwandiso lwangaphambili lwantlandlolo lwaphinda lwahlengahlengiswa.
Nangona ikhutshelwe kuphela iiWindows, Ubudala bemibuso II: uHlelo oluqinisekileyo yamkelwe kakuhle ngabagxeki kunye nabadlali. Ifumene amanqaku angama-84 kwangama-100 ukusuka Imetacritic kunye nama-78 kwayi-100 ukusuka Umdlalo wePC (UK).
3. Impucuko kaSid Meier V (2010)
Impucuko V sisiqingatha sesihlanu kwi Impucuko kaSid Meier uthotho. Ikhutshwe ngo-2010 yeWindows, iMacOS, kunye neLinux, le klassic yangoko nangoko ithathwa njengeyona midlalo ilungileyo ye-franchise kunye nomdlalo wesicwangciso esisekwe kubuchule bokujika.
Uthatha ulawulo lwempucuko enye nomsebenzi wokukhokela ukukhula kwayo ukusuka kumaxesha angaphambi kwembali ukuya kwixesha elizayo. Uya kulawula zombini iiyunithi zomkhosi nezomkhosi, ubayalele ukuba benze imisebenzi enjengokufumana izixeko ezitsha, ukuphuhlisa umhlaba, kunye nokuya emfazweni. Abadlali kuyakufuneka baphathe imveliso, ulwakhiwo, ubuchule, kunye nokuyalela ukukhula kwetekhnoloji.
Kuya kufuneka uhlangane nemeko yoloyiso okanye ube yimpucuko ephezulu ekupheliseni umdlalo wokugqibela ukuphumelela umdlalo. Impucuko V ufumene i-9 kwi-10 yokureyitha ukusuka IGN kunye nama-93 kwayi-100 ukusuka Umdlalo wePC (US) . Ikwaphumelele i-BAFTA ka-2010 yoMdlalo oBalaseleyo weSicwangciso.
I-XCOM 2 (2016)
Ukulandelelana kuka-2012 XCOM: Utshaba alwaziwa , XCOM 2 ibe yenye yezona zinto zithandwayo zisuselwa kubuchule bokujika ukusukela ekukhutshweni kwayo. I-prequel yayo yayiqala ngokutsha kwesihloko se-1994 X-COM: UFO Defense .
Kuthatha indawo kwiminyaka engama-20 emva kweziganeko ze Utshaba alwaziwa , Owayesakuba ngumbutho wezomkhosi i-XCOM ngoku uyintloko yokuchasana nabahlaseli basemzini. Uya kusebenzisa izakhono zakho zobuchule bokulawula inqanawa esekwe kwiXCOM kwaye uyalele iiyunithi zakho ngexesha ledabi elisekwe ekujikeni elibekwe kwiimephu ezahlukeneyo.
izinto abafana bathanda ukuzonwabisa
Kula madabi, iqela lakho kuya kufuneka lisuse iqela labaphambukeli ngaphakathi kwenani elimiselweyo lokujika kwaye lifezekise iinjongo zesibini. Njengoninzi lwemidlalo yeqhinga, ikwabandakanya umthi wetekhnoloji yokuphucula.
XCOM 2 ithengise ngaphezulu kweikopi ezingama-500,000 kwi-Steam kwiveki yayo yokuqala kwaye yonyulwa kumabhaso amaninzi oMdlalo woNyaka ngo-2016 nango-2017. UmdlaloSpot ulinganise umdlalo i-9 ngaphandle kwe-10 ngelixa IGN Uyinike i-9.3 ngaphandle kwe-10.Ikhutshwe kwakhona kwi-PlayStation 4, i-Xbox One, i-Nintendo Switch, i-iOS kunye ne-Linux.
5. INorthgard (2018)
Omnye weyona midlalo iphantsi kuluhlu lwethu, I-Northgard yaphuhliswa yinkampani ye-indie yeShiro Imidlalo eyaziwa kakhulu Evoland .Kule ntsomi yeNorse-ephefumlelweyo yeqhinga lokwenyani lomdlalo weqonga, uthathe ulawulo lweqela leViking kwaye usebenze ukoyisa ilizwekazi elitsha.
Uyakwakha indawo yokuhlala, wabele amalungu emindeni kwiindima ezahlukeneyo, kwaye ulawule izibonelelo zakho. Kwi I-Northgard , kuyakubakho iimeko ezahlukeneyo zoloyiso oya kuthi ugcwalise ukuze uphumelele.
Imvelaphi yayo ikhutshelwe i-PC, i-Xbox One, iNintendo Shintsha, kunye ne-PlayStation 4, umdlalo ukhuphe uguqulelo lweselfowuni lwe-iOS ngo-Epreli 13, 2021. Ngelixa ingadumanga njengeminye imidlalo kolu luhlu, lo mdlalo ngokuqinisekileyo ungeno olukhulu Imidlalo yeqhinga kubalandeli beentsomi zaseNorse.
Bona ngakumbi malunga - Eyona midlalo ilishumi yokudlala indima ngalo lonke ixesha
6.Imfazwe iyonke: IWarhammer II (2017)
Imidlalo kwi IWarhammer uthotho kuphela Imfazwe iyonke imidlalo enesimo sefantasy. Ngelixa eminye imidlalo kwi-franchise ithatha i-feudal Japan, i-medieval Yurophu, iRoma yakudala, kunye nolunye useto lwembali, IWarhammer icwangcisiwe IWarhammer ilizwe lefantasy elenziwe yiWorkshop yoMdlalo.
Iphulo elisekwe ekujikeni elinamadabi exesha lokwenyani Imfazwe iyonke I-franchise iye yaziwa ngokuba isabonakaliswa kulo mdlalo. Kule ndlela, ibali lembali ligubungela ungquzulwano phakathi kweElves Elves, High Elves, Lizardmen, kunye nemidyarho yeSkaven njengoko nganye ifuna ukuthatha ulawulo lweGreat Vortex.
Olona shushu lubandayo olubandayo
Imetacritic ufumene amanqaku angama-87 kwali-100 ngelixa IGN uyinike i-9.1 ngaphandle kwe-10. IWarhammer II Ukonyulwe kwakhona amabhaso aliqela eMidlalo ePhambili yoNyaka ngamajelo eendaba aliqela. IWarhammer II yakhutshwa kamva kwiLinux ngo-2018.
7. I-Europa Universalis IV (2013)
Ipapashwe yiParadox Interactive, ukukhutshwa kuka-2013 sisiqendu sesine se I-Europa Universalis uthotho. Ikhutshelwe iWindows, iMacOS, kunye neLinux, I-Europa Universalis IV yenye yemidlalo yeParadox ephumeleleyo ukuza kuthi ga ngoku.
Lo mdlalo weqhinga elihle ukuvumela ukuba ukhethe isizwe esiza kulawula, ukulawula urhwebo, idiplomacy kunye nemfazwe. Ujongano oluphambili yimephu iphela yoMhlaba, yahlulwe yangamazwe kunye namaphondo.
Uya kudinga ukuphakamisa umkhosi owomeleleyo ngelixa ugcina uqoqosho lwelizwe lakho kunye nokudibana namanye amazwe. Lo mdlalo wohlobo lwebhokisi yesanti ikuvumela ukuba useke ukubusa ngamandla omkhosi, kulawulo lwezorhwebo, okanye ekuhlanganiseni amazwe amaninzi kangangoko unakho. Inkolo ikwayinto ebalulekileyo kulo mdlalo njengoko inokunika iibhonasi kumaphondo athile onawo.
Ngelixa I-Europa Universalis IV ayinayo indawo yokudlala edabini eye yathandwa kwii-franchise ezinje Imfazwe iyonke Isicwangciso-qhinga sayo somdlalo obunzima sasanele ukonyusa ngaphezulu kwe-2 yezigidi zentengiso ngoFebruwari 2021. Ukutshabalalisa ulinganise umdlalo i-95 ngaphandle kwe-100 ngelixa Umdlalo wePC (US) wayinika i-91 kwi-100.
I-Tropico 6 (2019)
Ufakelo lwamva nje lwefayile ye- ITropiki uthotho olwaqala ngo-2001, Iitropiki 6 kukuthathela ingqalelo ukulinganisa kwezopolitiko. Njengo-El Presidente, kuya kufuneka ukhokele ilizwe laseCaribbean laseTropico kuzo zonke iindawo ezine ezahlukeneyo: I-Colonial Era, iiMfazwe zeHlabathi, iMfazwe ebandayo, kunye nexesha langoku.
ITropiki ithatha ngokuhlekisayo kwezopolitiko kwiiriphabliki zebhanana, kubandakanya nemicimbi efana nobuqhetseba kunyulo, ubugqwetha, kunye nozwilakhe. Kulo mdlalo, ukuba ubumi bakho buzichasile izigqibo zakho, banokukuvota okanye bavukele wena.
Iitropiki 6 lolona fakelo luthengisa ngokukhawuleza lwe ITropiki I-franchise kwaye watyunjelwa uMdlalo oBalaseleyo weSicwangciso kuwo omabini ama-2017 ama-Gamescom Awards kunye no-2019 amaBhaso eMidlalo.Ikhutshwe kwakhona kwiLinux, PlayStation 4, Xbox One, kwaye kutshanje, iNintendo Shintsha.
9. Kwi-Breach (2018)
Iphuhliswe y studio ye-indie Subset Imidlalo, KwiBreach sisicwangciso esisekwe ekujikeni esisethwe kwikamva le-dystopi apho uya kulawula khona amajoni angabantu asebenzisa ii-mechs ezinkulu ukulwa nezigebenga ezifuna ukutshabalalisa iigridi zamandla akho.
Uxhobe ngee-mech ezintathu ezahlukeneyo, uyakukhusela isiqithi emva kwesiqithi, ufumane abaqhubi beenqwelomoya kunye nee-mech njengoko usiya kufezekisa ezinye iinjongo. Ukuba woyiswa emfazweni, uya kuba nakho ukuthumela umqhubi wenqwelomoya omnye ngexesha, ugcine amava abo kunye namandla abo.
Omnye wemidlalo edumileyo kuluhlu lwethu, KwiBreach Utyunjelwe amabhaso angaphezulu kwamashumi amabini kwaye waphumelela amabhaso aliqela kubandakanya neMidlalo yeQhinga eliBalaseleyo kuma-2018 Amabhaso eMidlalo. KwiBreach ikhutshelwe iWindows, iMacOS, iLinux, iNintendo Shintsha, kunye neStadia.
10. Ubudala beentsomi (2002)
Isipina esivela kwi Ubudala boMbuso uthotho, Ubudala beentsomi Ngumdlalo weqhinga lokwenene-xesha elidlala ngendlela efanayo neminye imidlalo kwi-franchise, umahluko ophambili kukuba ithatha kwiintsomi endaweni yembali.
imibuzo enomdla yokubuza intombazana
Uya kukhetha phakathi kokudlala njengeNorse, amaGrike, okanye amaYiputa. Kuya kufuneka ukhethe uthixo omkhulu kwizithixo ezintathu emva kokukhetha inkcubeko yakho, ukubonelela ngetekhnoloji eyahlukileyo, iiyunithi kunye namandla akhethekileyo. Emva kokuba uqhubele kwenye iminyaka, kunokukhethwa uthixo omncinci. Ngokungafaniyo ne- Ubudala bemibuso imidlalo, nangona kunjalo, Ubudala beentsomi Inye kuphela iphulo eliphambili.
Umnxibelelanisi womdlalo ukalwe umdlalo 9.5 kwali-10 ngeli xesha IGN uyinike i-9.3 ngaphandle kwe-10. UmdlaloSpot ikwabiza owona mdlalo ubalaseleyo wekhompyuter kaNovemba 2002. Ukwanda kwayo, Titans , yakhululwa ngo-2003 yaza yongeza iiAtlantean njengenkcubeko edlalwayo kunye neeTitans njengenye yeeyunithi ezintsha.
Olunye ulwandiso, Ibali leNamba , eyongeze inkcubeko yasentsomini yamaTshayina kunye nephulo elitsha, iimephu kunye nezinye izinto, yakhutshwa ngo-2016.UKUYA ge yeentsomi iyafumaneka kwiWindows nakwiMacOS.
Bona ngakumbi malunga - Imidlalo eli-11 ebalaseleyo kwi-Intanethi edlalwa ngo-2021
iibhokisi zebhokisi ngeenwele zendalo
Umnyama kunye nomhlophe iPhoenix tattoo
Izimvo zepatio yegadi kuhlahlo-lwabiwo mali
unganxiba isuti ngaphandle kweqhina